Kedu ihe bụ uru Bara Uru Pụrụ Iche?
Otu esi emeputa ego bara uru
Satọde, 9 Juun 2018 Monday, December 17, 2018 Douglas Karr
Otu n'ime ọgụ m na ụlọ ọrụ na-alụ ọgụ mgbe niile bụ ịkwụsị iche echiche ihe ha n’eme ma malite iche echiche ihe mere ndị mmadụ ji eji ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha. Aga m enye gị ihe atụ ọsọ ọsọ… ụbọchị kwa ụbọchị, ị ga-ahụ m ka m na-edekọ ma na-edezi pọdkastị, na-ede koodu ntinye, na-emejuputa ụzọ ndị ọzọ, ma na-azụ ndị ahịa m. Blah, blah, blah… nke ahụ abụghị ihe kpatara ndị mmadụ ji arụ ọrụ m. Ha nwere ike nweta otu n’ime ọrụ ndị ahụ Fiverr maka otu narị ego n'ọrụ. Ndị ahịa m na-ewe m n'ọrụ n'ihi na m nwere ike ịgbanwe mbọ ahịa ahịa dijitalụ ha wee bulie nsonaazụ ha nke ọma maka obere ego.
Enwere ihe atụ m na-ejikarị. Enwere m ụgbọ ala nke m na-eweta maka nlekọta kwa ọnwa ma ọ bụ karịa. Ọ bụ idobe ụgbọ ala m n'ọnọdụ dị mma ma mee ka m na-agagharị na-arụ ọrụ. Adịghị m ọrụ ahụ. Ugbu a, ọ bụrụ na achọrọ m ime ka ụgbọ ala m gbanwee ma kwalite iji merie agbụrụ, m ga-ewetara ya igwe ahụ. Mba m n'ụlọnga abụghị ụlọ ahịa na-agbanwe mmanụ, ọ bụ ya merie n’ọsọ ahụ ụlọ ahịa.
Ọ dị mfe, nri? Mba… n’ihi na ụlọ ọrụ chere na ha na-azụ ahịa maka mgbanwe mmanụ mana ha chọrọ n’ezie bụ iji merie n’ọsọ ahụ.
A makwaara dị ka Profaịlụ Na-enweghị Uche (UVP), ọnụ ahịa gị bara uru bụ nkwupụta dị mkpirikpi nke gụnyere ọrụ nke ọrụ ị nyere yana otu ị ga-esi dị iche na ndị asọmpi gị.
Ndụmọdụ Ndụmọdụ: Tupu ịga n’ihu n’ihu ihe ị chere bụ gị Pụrụ Iche Bara Uru amuma… jụọ gị ugbu a ahịa ma ọ bụ ndị ahịa! O nwere ike iju gị anya na ọ bụghị ihe ị kwenyere na ọ ga-abụ.
your echiche bara uru nwere imezu ihe anọ:
Ọ ghaghị jide mmasị onye ọbịa ahụ. Companylọ ọrụ gị anaghị enweta nsonaazụ ọ tụrụ anya na azụmaahịa gị - ọ bụ ya mere ndị mmadụ ji were m ego.
Ọ ghaghị ịbụ mfe nghọta. M na-akọrọ na a azụmahịa mmekọrịta m na-eri ihe na-erughị na-eri nke a oge ọrụ mgbe na-enye ọtụtụ iri afọ nke nka.
Ọ ghaghị ọdịiche dị n'etiti gị site na ndị asọmpi gị n'ịntanetị. Ọ bụrụ na ndepụta nke ọnụahịa bara uru yiri ndị na-asọmpi gị, lekwasị anya na nke ha na-anaghị elekwasị anya. N'ihe atụ m, anyị abụghị ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na otu ọwa, nka m metụtara ọtụtụ teknụzụ na usoro ka m wee nye ndị isi azụmaahịa ndụmọdụ ka esi eme ka azụmahịa ha ka mma ka m na-agwa ihe onwunwe ha etu esi eme ya.
Ọ ga-adọrọ adọrọ ịbụ n'ezie mee ka mkpebi ịzụta onye ọbịa gbanwee. Ihe Nlereanya: Anyị na-enye Otu ụbọchị 30 nye ndị na-akwado anyị ebe anyị kwenyere na anyị bara uru ma chọọ ijide n'aka na onye ahịa anyị nwere ọganiihu.
Na ụlọ ọrụ ecommerce, enwere ọtụtụ uru dị iche iche bara uru dị iche iche… ọsọ nke nnyefe, onu ahia nke mbupu, atumatu nloghachi, nkwa di ala, nkwa ahia, onodu. A na-eji ha niile eme ka ntụkwasị obi dịkwuo elu ma mee ka onye ọbịa gaa ire ere na-ahapụghị ha na saịtị ahụ na nyocha ụlọ ahịa na ebe ọzọ. Maka ngwa ahịa gị ma ọ bụ aka ọrụ gị, ị kwesịrị inwe okike… ọ bụ akụ gị? Ọnọdụ? Ahụmahụ? Ndị ahịa? Ogo? Ọnụ?
Mgbe ị chọpụtasịrị uru pụrụ iche ị ga-atụle, ịkwesịrị ịkọrọ ya n'ime ya ma tinye ya na ozi na azụmaahịa ị na-ebuga.
Otu ezigbo ihe atụ bụ Ebe Data Data Centre, a agba nke etiti ọdịda anyanwụ ụlọ ọrụ na ndị ahịa nke anyị. Ha nwere ohere karịa maka ịkpụ karịa ndị ọ bụla na-asọmpi na Midwest. A kwadoro ha maka data nzuzo nzuzo gọọmentị etiti. Ma… ha na-ewu ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ugbu a na akụrụngwa ha. Nchikota bu ihe puru iche na anyi na ha na aru oru na saịtị na ika redesign nke ahụ ga-enwerịrị ọdịiche zuru oke!
UVP gị nwere ike ọ gaghị eduga na nchịkọta aha ọzọ… mana ọ ga-apụta ìhè site na webụsaịtị gị, mmekọrịta mmadụ na ibe gị, yana ọchụchọ gị ọnụ ahịa ihe uru ị bara bara bụ! Nke a bụ nnukwu infographic si QuickSprout, Etu aga - esi dee uru bara nnukwu uru.
Tags: otúesi deeinfographicquicksproutihe bara uru bara uruechiche bara uru
Social Suite: Social Media Management maka nnukwu, Multi-Ọnọdụ ụlọ ọrụ
Nke a bụ isiokwu dị mkpa. Echere m na ọtụtụ ndị na-eche na ha ghọtara UVP, mana na-agbagha ya na nkwupụta ozi. Ezigbo ọrụ, Douglas.